बैंकहरूले ग्लोबल वार्मिंगलाई प्रोत्साहित गर्छन् Martech Zone
बैंकहरूले ग्लोबल वार्मिंगलाई प्रोत्साहित गर्छन्
मंगलवार, अगस्त 7, 2007 बिहीबार, अगस्ट 9, 2007 Douglas Karr
अद्यतन 8 /9/ 2007: यकिन छैन कि योसँग मेरो ब्लग पोष्टसँग केहि छ कि छैन, तर स्काई फाइनान्सियलले अब $ १.1.75। प्रतिपूर्ति गरेको छ।
मेरो बैंकमा सन्देश, स्काई वित्तीय:
//8/२००3 मा म US of१ को स्मिथ भ्याली एटीएम र काउन्टी लाइन एटीएममा गएँ र दुबै एटीएमहरू सेवा बाहिर थिएन। म मेरो खातामा ०-2007-०31-२००08 विदेशी एटीएम प्रयोग सेवा शुल्क $ १.03। हटाउने सराहना गर्दछु। मसँग अर्को बैंकको एटीएम भ्रमण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन।
स्काई बैंकबाट प्रतिक्रिया:
दुर्भाग्यवस हामी विदेशी एटीएम उपयोग सेवा शुल्क फिर्ता गर्न सक्षम हुनेछैनौं। त्यहाँ different माईलको त्रिज्याको भित्र ग्रीनवुड भित्र पाँच भिन्न स्थानहरू छन्। यस विषयमा थप छलफलको लागि तपाईं आफ्नो ग्रीनवुड वित्तीय केन्द्र व्यवस्थापकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै हट्टिंग्टन बैंकको साथ आगामी मर्जरको साथ तपाईं कुनै पनि सेवा शुल्क बिना कुनै पनि ह Hunिंग्टन बैंक एटीएम मेशिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आकाश र हन्टिंगटनको बीचमा अहिले १,nt०० एटीएम छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
स्काई बैंक संग बैंकिंग को लागी धन्यवाद।
यो किन म बैँकहरुलाई घृणा गर्दछु र किन छलफल समाप्त भयो:
स्काई बैंकसँग बैंकिंग गरेकोमा मलाई धन्यवाद नदिनुहोस्। मैले स्काई बैंकसँग बैंकमा दुई पटक प्रयास गरें तर तपाईंको एटीएमहरू तल थिए।
त्यसोभए तपाईले सम्पूर्ण रुपमा मलाई एटीएम बाट एटीएम सम्म ड्राइभ गर्न जारी राख्नु भएको छ जब सम्म मैले काम गरिरहेको भेटिएन?
म उत्साहित भएको छु कि त्यहाँ १,1,400०० थप एटीएमहरू छन् जुन अनुपलब्ध हुन सक्छ?
यदि तपाईंले कहिले देख्नु भएको छ कि मैले यी व्यक्तिहरूसँग कतिवटा शुल्कहरू प्राप्त गरें, तपाईं दिक्क पार्नुहुनेछ। तथ्य यो हो कि तिनीहरू साधारण $ १.1.75use माफ गर्दैनन् हास्यास्पद छ। मलाई आशा छ कि सम्पूर्ण ग्राहक सेवा विभाग मर्जरमा डाउनसाइज हुनेछ।
यहाँ पाँच स्थानहरू छन् ... सुविधाजनक, हु ना?
यो थोरै चीजहरू हो जुन प्रयोगकर्ता अनुभवलाई सुधार गर्दछ!
Apple eMac र Microsoft XBox?
अगस्ट 7, 2007 मा 9: 08 AM
वाह! तपाई साँच्चिकै दु: खी हुनुहुन्छ।
तपाईंले धेरै भुक्तान गर्नुभयो जस्तो लाग्छ
शुल्कको। मैले पढेको कुराबाट
तपाई ब्ल्गरमा ठूलो शक्ति हुनुहुन्छ
संसार तिनीहरूले तपाइँलाई कल गर्दैछन्
अगस्ट 7, 2007 मा 10: 24 AM
हो, तिनीहरूले मलाई जान दिए! मैले प्रतिक्रिया पढे सम्म म वास्तवमा चिन्तित थिइनँ! म पक्का हुन चाहन्छु कि उनीहरूले यसको $ १.1.75 मूल्य प्राप्त गरे। 🙂
अगस्ट,, २०१72007:२१ अपराह्न
तपाईले अनलाइन बैंकसँग जानुहुन्छ। म संग बैंकिंग गरिएको छ एभरब्यांक पछिल्ला 8 बर्ष को लागी। तिनीहरूले मलाई एटीएम शुल्कमा $6/ mo सम्म प्रतिपूर्ति गर्छन्। तीनिहरु पनि पोष्ट पोष्ट गरिएको खाम प्रदान गर्दछ भित्र रसीद पठाउन।
एभरब्यांकले अन्य उत्कृष्ट सुविधाहरूको एक टन पनि प्रदान गर्दछ जुन प्राय जसो बैंकहरूले छुन्छन्।
म विश्वास गर्न सक्दिन कि कति व्यक्ति अझै अझै ईंट र मोर्टार बैंकहरू प्रयोग गर्छन्। म वास्तवमा कुरा देख्दिन।
केवल तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउनको लागि - होईन, वास्तवमा होइन।
म भन्छु यो नयाँ बैंक समय हो, तर अवस्था सुधार हुने छैन। तपाईंको एकमात्र वास्तविक विकल्प भनेको तपाईंको स्थानीय बैंक व्यवस्थापकसँग कुरा गर्नु हो।
१ 1400०० एटीएम पुन: - कि दुई बैंक बीच १ 1400०० छ, १1400०० नयाँ होइन, र कति राज्य बीचमा फैलियो? र, के तपाईंले कहिल्यै एक हingिंगडन एटीएम देख्नु भएको छ जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ? मैले यहाँ कहिले देखेको छैन।
मेरो व्यक्तिगत खाताहरू बैंक पनि स्काईमा छ। म त्यहाँ भएकोले यो तीन वा चार पटक बेचेको छ। मलाई कहिले पनि समस्या भएको छैन, तर म एटीएम प्रयोग गर्दिन।
मलाई लाग्छ के वास्तवमा विचलित गर्ने हो सेवा शुल्कहरूको अत्यन्तै उच्च मूल्य। Transaction १.1.50० देखि १.1.75 प्रति लेनदेन? हेक, तपाईंले एक पटकमा कम्तिमा १०० डलर फिर्ता लिनु पर्छ त्यो सुकर १% को पहुँचमा प्राप्त गर्न!
यहाँ क्यानाडामा हामीसंग केहि बैंकहरू छन् जुन राम्रो छ, यद्यपि त्यहाँ प्रत्येक बैंकबाट कम र थोरै एटीएमहरू भइरहेका छन् र बढी ठाउँहरूमा स्वतन्त्र एटीएमहरू पप हुँदैछन्। थोरै बैंक एटीएम र अधिक स्वतन्त्र = अधिक सेवा शुल्क ...
मैले आफैलाई "हो!" भनिरहेको छु। स्टोरमा चेकआउटको समयमा सोधिएको बेला नगद-ब्याकमा - कुनै बेवकूफ सेवा शुल्क…। र हेक जे भए पनि 'सेवा शुल्क' को साथ छ? यो एक CONVENIENCE शुल्क हो। मेरो बैंकले मलाई सेवाको लागि चार्ज गर्दछ - वास्तवमा यकिन छैन कि मैले यसको लागि के पाएँ…
बैंकहरू र सेल फोन कम्पनीहरू - मेरो अस्तित्वको फ्यान।
अगस्ट,, २०१ 8 2007:२१ अपराह्न
हास्यास्पद क्रमबद्ध गर्नुहोस् ... मलाई लाग्छ मसँग अझै रोनाल्ड बैंक अफ क्यानाडा खाता छ। यदि यो फीसका लागि बन्द गरिएको थिएन (जुन यो सम्भवतः थियो)… जो जान्दछ, हुनसक्छ म करोडपति हुँ! खास गरी अब जुन हाम्रो पैसाको भन्दा बलिया बढ्दैछ!
बैंकहरू र सेल फोन कम्पनीहरूमा आमिन। यस्तो देखिन्छ कि पुरानो तपाईं कम्पनीको रूपमा हुनुहुन्छ, ग्राहकको ख्याल गर्दा तपाईं झन् नराम्रो नै हुनुहुनेछ! त्यहाँ एयरलाइन्सहरू पनि फालिदिनुहोस्।
@ रिक: म एक विशाल अनलाइन बैंकर हुँ, रिक। मलाई लाग्छ कि किन म यति उग्र भएको छु। मैले आफ्नो खाता अनलाइन खोले पनि! मेरो व्यवसाय ह्यान्डल गर्न तिनीहरूलाई एक प्रतिशत लाग्दैन।
@ रान्डि: सुन्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईंलाई सही व्यवहार गर्दैछन्, र्यान्डी! म तिनीहरूसँग खाता खोल्न जाँदैछु।
अगस्ट 9, 2007 मा 11: 10 AM
के यो ब्लगको शक्ति हो? मेरो बैंकले आज $ १.1.75। प्रतिपूर्ति गर्‍यो।
अगस्ट,, २०१ 14 2007:२१ अपराह्न
मर्जरको कारणले सम्पूर्ण ग्राहक सेवा विभागलाई डाउनसाइज गर्ने आशा गरेकोमा कसरी टिप्पणी गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ ??? हो, हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै काम गर्छौं जसले तपाईंलाई सबैलाई फिज फिर्ता दिन प्रेम गर्दछ तर हामीसँग त्यसो गर्ने अधिकार छैन। त्यहाँ सयौं मानिसहरू छन् जसले आफ्नो जागिर गुमाउन लागेका छन्। सयौं बच्चाहरू जसको जीवन शैली तिनीहरू प्रयोग गर्छन् नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुनेछ। त्यसोभए त्यस्तो टिप्पणी नगर्नुहोस् किनकि तपाईं एक बेवकूफ थोरै $ १. ATM1.75 एटीएम शुल्कको साथ सर्तमा आउन सक्नुहुन्न जुन तपाईं आफ्नो सानो क्रेबाबी वेबसाइटको लागि जे भए पनि फिर्ता हुनुभयो। यो ग्राहक सेवा गल्ती होइन तपाईलाई चार्ज गरिएको थियो न त यो उनीहरूको गल्ती हो कि यो पहिले फिर्ता भएन। तपाईंले यसलाई फिर्ता प्राप्त गर्न के गर्नुभयो ठीक थियो तर तपाईंले कठोर टिप्पणीहरू गलत व्यक्तिलाई निर्देशित गर्नुभयो। म तपाईंलाई लगभग ग्यारेन्टी गर्न सक्छु कि यदि तपाईंले रोजगार को लागी कुनै प्रतिनिधि संग कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईंलाई तिर्नुपर्ने माया फिर्ता फिर्ता दिन बताउनेछन्। त्यसोभए तपाईको बारेमा आफ्नो मुख चलाउनु भन्दा पहिले मानिसहरुलाई कुचल्नु भन्दा पहिले आफ्नो तथ्यहरु थाहा पाउनुहोस् कम्पनीले उनीहरूलाई चोट पुर्याएको भन्दा बढी। धेरै व्यक्तिहरू जुन आफ्नो जागिर गुमाउँदैछन् त्यहाँ वर्षौं देखि भएको छ र यो गल्ती होइन कि तपाईंलाई शुल्क लिइएको थियो जुन केही करोडपति बैंकरले चार्ज गर्ने निर्णय गरे ताकि उनी धनी हुन सके। तपाईले के भन्नु पर्छ भनेको के हो जुन मानिसहरूलाई नियम बनाउनेहरूले आफ्नो जागिर गुमाउने आशा गर्दछन्। हामीले केहि पनि भुक्तानी पाएनौं र यति धेरै दुरुपयोग लिन्छौं, तपाईंको टिप्पणी मामूली दुरूपयोग हो। यदि कसैले भोली भन्यो कि तपाईसँग अब काम छैन भने तपाई कसरी यो चाहानुहुन्छ? वा यदि तपाईंको परिवारमा कसैलाई भनियो कि अर्को कम्पनीले उनीहरूको हातमा लिएको छ र तिनीहरूलाई अब आवश्यक पर्दैन? लिनको लागि कडा हिट छ। त्यसोभए तपाईको विचारमा आधारित टिप्पणीहरू नगर्नुहोस्, तथ्यहरू सिक्नुहोस् तपाईले निर्णय गर्नु अघि तपाईले सबैलाई जागिरबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ।
केवल एक कम्पनी परिवर्तन भित्रबाट हो। यदि ठूला कामदारहरूले खराब नियोक्ताहरू वा नराम्रो कम्पनीहरू छोडे भने यसले कम्पनीलाई पाठ सिकाउँदछ।
यदि तपाईं वास्तवमै यसको बारेमा केहि गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईंलाई यो अनुचित पनि विश्वास छ भने, त्यसोभए तपाईंले त्यस्तै संगठनलाई समर्थन गर्नुको सट्टा छोड्नु पर्छ।
तपाईंलाई थाहा छ र मलाई थाहा छ स्काई बैंक (र अघिल्लो नामहरू) गरिब व्यक्तिहरूले शुल्क र जरिमाना तिर्ने गर्दछन्। यो आपराधिक हुनुपर्दछ ... तर जबसम्म तिनीहरूसँग बिडिंग गर्न लामिमि haveहरू हुन्छन्, म अनुमान गर्दछु चीजहरू परिवर्तन हुँदैनन्।
अगस्ट 16, 2007 मा 5: 46 AM
छोड? Thats सजिलो भन्दा भनियो जब कार्यहरू लगभग गैर कतर्क हुन्छन् जहाँ म बस्दछु। त्यहाँ बाहिर कुनै कार्यहरू छैनन् जुनसँग नीति / प्रक्रिया छैन जुन सबैले स्वीकार गर्नेछन्। केवल किनभने तपाईं एक कम्पनीको लागि काम गर्नुहुन्छ जुन सही छैन, तपाईंलाई खराब व्यक्ति बनाउँदैन। र ग्राहक सेवाको तपाईंको $ १.1.75। सँग कुनै सरोकार छैन। हामीले त्यो शुल्क बनाउन सकेनौं। र म विश्वास गर्दछु कि हामी सबैले त्यो मूर्ख शुल्क पनि तिर्दछौं। तर म तिमीलाई बताउनु पर्छ, धेरै जसो बैंकहरूले यसलाई चार्ज गर्छन्। र प्राय जसो बैंकहरूले तपाईंलाई स्टोरमा डेबिट प्रयोग गर्न शुल्क दिन्छन्। SKY गर्दैन, हन्टिंगटनले गर्छ। त्यसोभए तपाईले देख्नु भयो कि त्यहाँ धेरै नीतिहरू छन् जुन तपाईंले छोड्ने ठाउँमा दुब्लो र पनी थाल्छ। मलाई यकीन छ कि वालमार्टमा काम गरिरहेको कसैले तपाईंलाई त्यस चीजको बारेमा कुरा गर्न सक्छ जुन… त्यहाँ सुख्खा हुन्छ।… यदि तिनीहरू कुनै आईटमको लागि ज्यादै बढी शुल्क लिन्छन् भने त्यो व्यक्ति गल्ती हुन्छ किनकि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईले फाट्नु भएको छ? मलाई लाग्छ कि तपाइँसँग तपाइँसँग समय दिनको लागि अझ राम्रा चीजहरू फेला पार्न आवश्यक छ $ १.1.75 about को चिन्ताका बारेमा र त्यसपछि घुमाउनुहुन्छ र १०० भन्दा बढि सम्पूर्ण बेरोजगार बन्न चाहानुहुन्छ र बेरोजगार लाइनमा तपाइँले कर तिर्नुहुन्छ !!!!
अगस्ट 17, 2007 मा 2: 22 AM
म करहरूमा मेरा अवसरहरू लिन सक्छु। कम्तिमा करहरूले आय दायरा भरि नै न्यायसंगत हुन कोसिस गर्छन् (वास्तवमा, ती धनीहरूलाई दंड दिन्छन्)। बैंक शुल्कले केवल मध्यम र तल्लो वर्गलाई दण्ड दिन्छ।
यस्तो देखिन्छ कि तपाईं एक भावुक कर्मचारी हुनुहुन्छ जसले तपाईंको ग्राहकहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ। म आशा गर्छु तपाईले केहि राम्रो पाउनुहुनेछ म वास्तवमै गर्छु।